Cabdikariin Xuseen Guuleed oo loo Doortay Madaxweynaha Galmudug – STAR FM SOMALIA
Cabdikariin Xuseen Guuleed oo loo Doortay Madaxweynaha Galmudug
Doorasho ka dhacday magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, halkaas oo ay taallay gogosha maamul u sameynta Gobollada Galgaduud iyo Mudug ayaa madaxweyne loogu doortay C/Kariin Xuseen Guuleed.
Doorashada oo ahay saddex wareeg ayey ildhibaannada cod ku kala reebeen murashaxiin ay tiradoodu ahayd lix, kuwaas oo u tartamayay qabashada xilka madaxweynaha maamulka goboleedka cusub ee Galmudug. Saddex kamid ah murashaxiinta oo kala ahaa Cabdi Qeybdiid, Xasan Qalaad iyo Mudane ayaa ku haray wareeggii 1aad ee doorashada, iyadoo ay wareegga labaad usoo gudbeen C/Kariin Xuseen Guuleed, Axmad Macallin Fiqi iyo Axmad C/Salaan. Codeyn kadib waxaa wareegga saddexaad isugu soo haray C/Kariin Xuseen Guuleed iyo Axmad Macallin Fiqi.
C/kariin Xuseen Guuleed ayaa wareeggii saddexaad ee doorashada ku guuleystay Madaxweynenimada dowlad goboleedka Galmudug,isaga oo helay 49 cod, halka Musharaxii kale ee la tartamayay Axmed Macalin Fiqi uu helay 40.
Dad badan oo siyaasadda odorosa ayaa sii saadaaliyay in C/Kariin Xuseen Guuleed uu ku guuleysan karo madaxweynaha maamulka Galmudug, maadaama uu taageero ka heystay Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ay saaxiibo yihiin.
Ra’iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya oo u Hambalyeeyay Madax weynaha cusub ee Galmudug
Mudanayaasha Baarlamaanka oo loo qeybiyay Taariikh Nololeedka Guddiyada Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka iyo Xuduudaha